Tag: xusuusta | Martech Zone
Sabtida, Maarso 6, 2021 Sabtida, Maarso 6, 2021 Douglas Karr
In badan oo idinka mid ah ayaa soo booqda bartayada 'blog' sababta oo ah dadaalka joogtada ah ee aan u galay wadaagista faahfaahinta suuqgeynta Si fudud u dheh… Waan jeclahay iyaga waana dad caan ah. Waxaa jira sababo dhowr ah oo ah in sawir-gacmeedka ay sifiican ugu shaqeeyaan istiraatiijiyadaha suuq-geynta dijitaalka ganacsiyada: Muuqaal - Kala badh maskaxdeena ayaa loogu talagalay aragtida iyo 90% macluumaadka aan hayno waa muuqaal. Sawirada, jaantusyada, iyo sawirraduba waa dhammaantood dhexdhexaadin muhiim ah oo lagula xiriiro iibsadahaaga. 65%
Sidee Muhiim Ugu Tahay Sawiradu Mawduucaaga Dijital ah?
Arbacada, Oktoobar 3, 2018 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Sawirradu waa kala duwanaansho muhiim ah oo aan uga faa'iideysanno qayb kasta oo ka mid ah istiraatiijiyadda nuxurka ah ee aan ugu farsameeyo macaamiisheenna. Waxaan ku qarashgareynaa wax badan, xitaa in ka badan, naqshadeynta garaafyada iyo sawir qaadayaasha in ka badan inta aan ku bixinno baaritaanka iyo qoraalka. Soo noqoshada maalgashiga ayaa had iyo jeer waxtar leh. Sawirro qaas ah, macno malahan aniga in shirkad ku qarash gareyso $ 5k ilaa $ 100k degel cusub laakiin ka boodeyso inaad dhowr boqol oo doolar ku bixiso
Isgaarsiinta Muuqaalka ah ayaa Ka Soo Baxaysa Goobta Shaqada
Arbaco, Juun 13, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Toddobaadkan, waxaan ku jiray laba kulan oo aan la yeeshay shirkado kala duwan usbuucaan halkaasoo isgaarsiinta gudaha ay diiradda saareysay wadahadalka: Midka koowaad wuxuu ahaa Sigstr, oo ah aalad suuq geyn saxeex email ah oo lagu maareeyo saxiixyada emailka ee shirkadda oo dhan. Arrin muhiim u ah ururada dhexdooda ayaa ah in shaqaaluhu diirada saaraan mas'uuliyadahooda shaqo oo aysan marwalba waqti u qaadin si ay ugula xiriiraan astaanta dibada rajooyinka iyo macaamiisha. Adoo maareynaya saxeexyada emaylka ee hay'adda oo dhan, Sigstr waxay u tahay mid cusub